Uchonywe uphaphe ngokusebenzela abesifazane
UNKK Phumzile Mlambo-Ngcuka ochonywe uphaphe lwegwalagwala ngezinhlelo zabesifazane abezenza ngesikhathi engaphansi kophiko lwabesifazane enhlanganweni yamazwe omhlaba, iUN Women: Isithombe: SIGCINIWE
Phili Mjoli | September 23, 2021
OBEYISIKHULU ophikweni lwenhlangano yezizwe olubhekele abesifazane i-UN Women, uNkk Phumzile Mlambo-Ngcuka uchonywe uphaphe lwegwalagwala ngomsebenzi wakhe omuhle awenze ngesikhathi esebenza kulolu phiko.
UNkk Mlambo Ngcuka uchonywe uphaphe wahlonishwa nge--2021 Global Goalkeeper Award ,yinhlangano engenzi nzuzo iBill&Melinda Gates Foundation ngoLwesibili.
Le nhlangano ibihlonipha abaholi ababambe iqhaza ekuqinisekiseni ukuthi umhlaba uyakwazi ukufinyelela kulokho ozibekele kona ngaphansi kwamasu i-Suistainable Development Goals (SDG).
UNkk Mlambo-Ngcuka uqhakambiswe ngomsebenzi awenzile ngesikhathi ekulolu phiko. Ubebhekele izinhlelo zokulingana phakathi kwabesilisa nabesifazane . Nyakenye ubeyingxenye yethimba ebelibheka indlela abesifazane nezingane abathinteke ngayo njengoba kunobhubhane iCorona.
Isitatimende esithunyelwe yinhlangano i-Bill& Melinda Gates, sithe uNkk Mlambo-Ngcuka wenze umsebenzi oncomekayo ngokwenza isiqiniseko sokuthi uyakuveza ukuthi abantu besifazane banezinselelo ezingakanani ngenxa yokuhlasela kwalolu bhubhane.
"UNkk Mlambo-Ngcuka wenze nkonke okusemandleni akhe ukuthi aveze isithombe esiyiso ngendlela abesifazane nezingane abathinteka ngayo," kusho isitatimende.
Isikhathi sokusebenza kulolu phiko sikaNkk Mlambo-Nguka, siphele ngenyanga edlule. NgoJulayi ubehola futhi eyingxenye yeGeneration Equality Forum.
Lesi sigungu siqoqe imali elinganiselwa ku-R593 billion enikezwe izinhlangano zabesifazane namantombazane emhlabeni wonke.
UMnuz Mark Suzman isikhulu esiphezulu kwiBill& Melinda Gates Foundation, uthe: " Abesifazane bebehamba phambili ngokuqhamuka nezindlela ezintsha ezingasiza ekutheni kuphele ukungalingani okukhona kubantu besifazane namantombazane uma beqhathaniswa namadoda. Laba besifazane basebenze ngokuzimisela okukhulu. Umsebenzi wabo ngeke ulibaleke."
ULalela ufuna ukusiza intsha ngamathuba omsebenzi
UBhaka usephendule umuzi wakhe indawo yobumnandi
Kuboshwe ababili ngokubulawa kukaMaselesele
Ingebhe kubulawa abayisishiyagalolunye eClare Estate
Ubabaza unya umndeni wentombi nto ebulewe
UMicho ulahlwe amacala okunukubeza ngokocansi